Okuqondiwe okusetshenziselwe ukugoqa ukugoqa kwemikhiqizo kagesi
Imikhiqizo ye-elekthronikhi isetshenziswa kuyo yonke imikhakha yempilo, futhi iningi lale mikhiqizo kagesi idinga ukufakwa ngaphambi kokufakwa emakethe. Kulezi zinsuku, umshini wokugcoba ovame ukusetshenziswa kakhulu ngumshini wokumisa umshini we-magnetron sputtering. Lapha, sifika Bheka izinhloso ezisetshenziswe ekuhloleni. Ngokuvamile, izinto eziqondiwe esizisebenzisayo aziyona nje izinhlobo ezintathu: amatshe ensimbi, ingxubevange okuhlosiwe, kanye nezinhloso ezihlanganisiwe..
Kunezinhloso eziningi ezisetshenziswe kuma-hard disk. Amafilimu anezendlalelo eziningi ahlanganiswe endaweni yokuqopha. Ifilimu ngayinye inomsebenzi wayo. Kusendlalelo esingezansi, 40I-nm thick chromium noma i-chromium alloy izofakwa ukuqinisa ukumelana nokumelana nokugqwala. , Bese ifakwa nge-15nm thick cobalt chromium alloy phakathi, bese ifakwa ngengxubevange ye-cobalt engu-35nm, njengempahla kazibuthe, le nto ingabonisa ngokuphelele izici zikazibuthe nokuphazamiseka okuphansi, futhi ekugcineni yagcotshwa ngefilimu engu-15nm obukhulu yekhabhoni.
Ukulengiswa kwekhanda likazibuthe kuvame ukusetshenziswa i-iron-nickel alloy, futhi ezinye izinto ezihlanganisiwe ezintsha zengezwe kamuva, njenge-nitride yensimbi, i-iron tantalum nitride, i-iron aluminium nitride, njll., okuyizinto ezisezingeni eliphakeme zamagnetic dielectric film target materials.
Ama-CD disc azosebenzisa ifilimu ye-aluminium njengohlaka olubonakalisayo oluzofakwa ezintweni zokusebenza zepulasitiki, kodwa kuma-CDROM nama-DVDROM, ifilimu ye-aluminium ayinakusetshenziswa, ngoba kuzoba khona ungqimba wedayi kulawa madiski, futhi into eku-Aluminium ibola ibanga elithile, futhi ngokuvamile ithathelwa indawo yigolide noma isiliva ifilimu.
Isendlalelo sefilimu se-disc optical naso sakhiwe izingqimba eziningi. Ifakwe ungqimba wokuqopha wensimbi engu-30nm obukhulu ku-ungqimba wedayi, exutshwe nezinto eziguqukayo zomhlaba eziguqukayo ze-amorphous, Ngemuva kwalokho wafaka i 20 kuye ungqimba we-dielectric ka-100nm obukhulu obukhulu. Ekugcineni ifakwe ungqimba lwe-aluminium olubonakalisayo.
Le mikhiqizo ye-elekthronikhi edinga ukufeza izakhiwo kazibuthe futhi engarekhoda idatha, ukufeza le misebenzi, kusadingeka ukuthembela kwifilimu ekhishwe izinto ezahlukahlukene, nokuhleleka kwama-crystal states okuvezwe ngemuva kokuthi ifilimu isakhiwe..
Prev: Ungayilungisa kanjani ilitshe le-sputtering
Next: Izinzuzo zamatshe alinganayo e-cylindrical and planar magnetron sputtering